UBUNGAKANANI BEBHAFU (ISIKHOKELO SOBUNGAKANANI) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Ubungakanani bebhafu (Isikhokelo soBungakanani)
Ubungakanani bebhafu (Isikhokelo soBungakanani)
Apha sabelana ngesikhokelo sobungakanani bebhafu yokuhlambela i-alcove, ukungena ngaphakathi, ukuhamba-ngaphakathi, ikona, ukujikeleza, ezincinci, ezirhabaxa kunye neebhafu ezizimeleyo.
Iindawo zokuhlambela ziindawo ezininzi eziqinisekisiweyo zokuba zisetyenziswe nzima. Igumbi lokuhlambela elibekwe kakuhle, elilungelelanisiweyo, nelinomtsalane liluncedo nakweyiphi na indlu. Nokuba udala igumbi lokuhlambela elitsha ekuqaleni okanye uhlaziya indawo esele ikho, ukuyibeka yenye yezona zinto zibalulekileyo.
Nangona kunjalo, izindlu zangasese ngokubanzi lelona gumbi lincinci endlwini. Ukuxinana kwindlu yangasese, isinki, ishawa okanye ibhafu enendawo efanelekileyo yokugcina, ukucoca kunye nokungenisa umoya ayingomsebenzi olula. Xa kusongezwa enye ingxaki yemibhobho yamanzi, ayimangalisi into yokuba kube nzima ukuba balunge.
Elona candelo likhulu lokungena kwindawo yokuhlambela liza kunikezelwa kwibhafu yakho. Ukuze ucwangcise indawo ngokufanelekileyo kwaye uphephe iingxaki ezantsi emgceni, kubalulekile ukwazi ubungakanani bezitayile zebhafu ezidumileyo.
Imilinganiselo yeBhafu emiselweyo
Alcove Bathtub Ubukhulu
Ibhafu erhabaxa kubukhulu
Ubukhulu bebhafu obujingayo
Ubukhulu beBhafu encinci
Ubungakanani beBhafu yokujikeleza (isitayile saseJapan)
Imilinganiselo yokuhlambela ebhafini
Ubungakanani beBhafu yokuHamba
Eli nqaku lijongana nobukhulu obuqhelekileyo bezitayile ezahlukeneyo zebhafu. Nangona kunjalo, igama lesilumkiso: ukumiselwa komgangatho kuya kude kube ngoku. Akukho mithetho okanye imigaqo ilawula ubungakanani beebhafu. Akufanele ukhethe ibhafu ngaphandle kokubonisana neenkcukacha zomenzi, kunye nokulinganisa indawo yakho (ubuncinci kabini!) Ukuqinisekisa ukuba ibhafu oyityala kuyo iya kuba lula ukuyifaka.
An ibhafu yokuhlambela ihlala idityaniswa neshawa. Ijikelezwe ngamacala amathathu ngeendonga, kunye nentloko yeshawari kwaye ucofe kudonga olunye. Rhoqo, ibhafu yokuhlambela isebenzisa ikhethini leshawa kunokuba icango. Umgangatho wesizathu, zibiza indleko kwaye zinokusetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo.
Ngokuqhelekileyo zilinganisa i-intshi ezingama-60 ubude kwaye zii-intshi ezingama-30 ukuya kuma-32 ububanzi. Ubunzulu abuphantsi komgangatho- naphi na phakathi kwe-14 kunye nee-intshi ezingama-20.
'Ukurhabaxa' sisigaba sokwakha. Ngeli nqanaba, lonke uqhagamshelo lubekwe endlwini, kubandakanya umbane, umatshini, kwaye ke, imibhobho yamanzi. Ukufumana eli lungelo linyathelo elibalulekileyo kwiprojekthi yokwakha eyimpumelelo- ukuba yenziwe kakuhle, ukufakwa kwezixhobo kunye nokugqitywa kuya kungena ngokulula.
Ukubekwa kwemingxunya yemibhobho kufuneka kulungelelaniswe nempompo yebhafu. Ukubekwa okusemgangathweni kweevaluva zefompe zii-intshi ezingama-20 ukuya kuma-22 ngaphezulu komgangatho. Itephu nganye kufuneka ibe zii-intshi ezi-4 ukuya ngasekunene nangasekhohlo komgca osembindini (umgca wokucinga othe ngcembe unyuka usuka embindini wedreyini.)
Umbhobho wokutshiza kufuneka ubekwe ii-intshi ezi-4 ngaphezulu komphetho webhafu. Ewe, ngelixa le milinganiselo ixhaphakile, nayiphi na ibhafu inokuba neemfuno ezahlukeneyo. Kubalulekile ukujonga imigaqo yemodeli ethile efakiweyo.
Ungasebenzisa enye yeentlobo ezininzi ze Isoftware yokulungisa indawo yangasese iinkqubo zokuyila kunye nokuyila uyilo lwakho ukuqinisekisa ukuba lulunga ngokugqibeleleyo kubeko lwasekhaya.
yintoni ubuzwe bruno mars
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwibhafu yokuhamba ngokukhululekileyo kukuba ayincanyathiswanga nakuluphi na udonga. Imibhobho edityaniswe ngqo phantsi. Zintle kwaye zinomtsalane, kwaye kulula nokuzijikeleza.
Iindawo zokuhlambela ezincinci ezikhululekileyo zihlala zii-intshi ezingama-55 ubude, ii-intshi ezingama-27 ububanzi, kunye nee-intshi ezili-15 ubunzulu. Ibhafu yokubhabha enomlinganiso ophakathi ngokomlinganiso ifana nebhafu yokuhlambela - malunga nee-intshi ezingama-60 ubude, i-intshi ezingama-30 ububanzi, kunye nee-intshi ezingama-19 ubunzulu.
Iibhafu ezinkulu zokuhlamba ezikhulu zinokuhlala ixesha elide kunabantu abadala abaqhelekileyo, ukuqala kwii-intshi ezingama-72 ubude, okanye ukubetha kweenyawo ezi-6! Ububanzi babo buhlala bubukhulu obukhulu, njengee-intshi ezingama-32, kwaye ubunzulu ngokubanzi zii-intshi ezingama-20.
Ibhafu encinci encinci ekhoyo ine-intshi ezingama-54 ubude, ii-intshi ezingama-30 ububanzi, nee-intshi ezili-15. Olu lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukuhlamba abantwana abancinci okanye izilwanyana. Kubo bonke abantu abadala ngaphandle kweyona imfutshane, le bhafu iya kuba yinto ephazamisayo ukuhlamba. Abantu abadala abaninzi sele beqhelile ukukhetha phakathi kokufaka imilenze yabo okanye iitorsos ebhafini. Ngobungakanani obuncinci beebhate ze-alcove, akunakwenzeka.
Iibhafu zeekona zihlala zibonwa kwiindawo zokuhlambela eziphambili. Zenzelwe ukufunxa okude, okunethezeka. Zihlala zikwere okanye zinxantathu ukumila.
Ibhafu encinci yekona inokulinganisa i-4 inyawo nge-4 iinyawo (48 × 48) Ibhafu yokubhabha yekona ngokubanzi ziimitha ezintlanu (60 × 60), kwaye ibhafu enkulu yebhafu yekona inokulinganisa iinyawo ezintandathu ngeenyawo ezintandathu. (72 × 72).
Ukukhetha okungaqhelekanga kwindawo yokuhlambela, ubuncinci ngaphandle kweJapan, ibhafu yokujikeleza. Bahamba ngamagama aliqela: ukufunxa iibhafu, Iibhafu zaseJapan , okanye, ngesiJapan santlandlolo, ofuro. Ezi zihlala zimi simahla, kodwa hayi rhoqo.
Ibhafu yokugezela ngokufuthi ayiquki ishawa . Zingenziwa ngomthi okanye ngeceram. Ubungakanani obuqhelekileyo bebhafu yomntu omnye buya kuba zi-intshi ezingama-48 ubukhulu, kunye nee-intshi ezingama-30 ubunzulu. Oku kuvumela ukucwina okunzulu kunebhafu yendabuko.
Iibhabhu ezifanelekileyo kubantu ababini ziyafumaneka, kodwa ziba zi-oval shape - i-intshi ezingama-65 ubude, kunye nee-intshi ezingama-30 ububanzi kwelona candelo likhulu- ngelixa zigcina ubunzulu bee-intshi ezingama-30.
Ukwenza ibhafu yokuhlisela, kwakhiwa indawo yokuhlala, kunye nebhafu yokuhombisa elula (engenawo macala okanye izixhasi ezakhelweyo), ibekwe ngaphakathi kuyo. Emva koko, ipaki igqunywe ngetayile.
Yinkqubo esemgangathweni yokushiya ubuncinci i-intshi ezi-6 zendawo ethe tyaba ngokupheleleyo ejikeleze ibhafu. Oku kuthetha ukuba kufuneka ucwangcise ngononophelo kwisithuba esongezelelweyo esijikeleze umjikelo. Olu hlobo lubetha kakhulu kwaye luyonwabisa xa lubhangqiwe ngebhafu enkulu yabantu ababini.
Ubude bebhabhu enkulu bunokuba phakathi kwe-intshi ezingama-45 ukuya kuma-72, kunye nonyawo olongezelelekileyo kumgangatho. Ububanzi buhlala phakathi kwama-intshi angama-30 no-32 kunye, kwakhona, unyawo olongezelelweyo lomgangatho owongeziweyo ukubala kokufakela. Ukuphakama kuyafana noko kwebhafu yokuhlamba esezantsi, ii-intshi ezingama-14 ukuya kwezingama-20.
Ukuba uhlaziya okanye wakha igumbi lokuhlambela kwaye ufuna ukuba lifikeleleke kubantu abanobunzima bokuhamba, unokucinga ngebhafu yokuhamba. Ezi tubs zakhiwe ngomnyango ecaleni, ukuze umsebenzisi angene kwaye aphume ngaphandle kokuphakamisa umlenze ngaphezulu komphetho omde.
Ibhafu yokuhamba ihamba ngesiqhelo ukusuka kuma-51 ukuya kuma-60 length ubude nge-28 ″ ukuya kuma-32 ″ ububanzi kwaye ijikeleze i-39 ″ ukuya kuma-40 ″ ubude. Unokufumana iiyunithi ezincinci, nangona kunjalo zinokubangela imiba ngokuthuthuzela, ukungena nokuphuma. Kukho iibhafu ezincinane ezimile okwe squarish ezilinganisa i-31.5 ″ ububanzi 37.5 ″ ubude kunye no-38.5 ″ ubude.
Umahluko ophambili kubungakanani bubunzulu. Apho ibhafu yomndilili inobunzulu bee-intshi ezingama-14 ukuya kwezi-20, ibhafu yokuhamba ikufutshane nee-intshi ezingama-30 ngokomndilili.
Linganisa kabini, sika kanye, kwaye ngaphambi kokuba wazi ukuba uyakonwabela ukucwina okude kwibhafu yakho efanelekileyo. Yonwabele! Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela isikhokelo sethu kwi indlela yokukhetha ibhafu .
Umgangatho waseMelika 2946102.011 Studio I… $ 553.80 umthengisi ogqibelele (28) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umgangatho waseMelika 2748.002.011 Idolophu Sq… $ 811.85 umthengisi ogqibelele (6) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IKingston Brass VTAP663222R iAqua… $ 635.79$ 849.95 umthengisi ogqibelele (32) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-KOHLER K-1123-RA-0 Umtoli we-5-Foot Bath ... $ 733.50 umthengisi ogqibelele (58) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Ithetha ntoni i-rsvp kwizimemo zokuzalwa
Isixhobo sokuyila sokuhlaziya
ukuphakama kwendawo yokugcina iimpahla